आमा १४ मा, छोरी कतिमा ?::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
आमा १४ मा, छोरी कतिमा ?
काठमाडौं – १४ वर्षको उमेरमा अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले सन्तान फिल्मबाट नेपाली रजतपटमा पाइला चालिन् । उनको उदयले सावित गरिदियो– उनी सदाबहार हुन् । अहिले पनि फिटसँगै ‘हिट’ रहेका करिश्माको फिल्मि करिअर अन्यको तुलनामा संघर्षशील, चुनौतिपूर्णमात्र होइन सफलता अनुकुलताको कसीमा राखिन्छ । ४४ वर्ष पुगिन् उनी ।
अमेरिकामा अध्ययन गरेकी कविता ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानीबाट’ फिल्मी क्षेत्रमा आउँदैछिन् । केही समयअघि जन्मदिन मनाएकी कविता कति वर्ष लागिन् रु खुलाइएको छैन । यसैकारण पनि उनी कति वर्षमा फिल्म खेल्दैछिन् रु यसलाई प्रश्नमै सीमित राखौं ।